Hery - Tsiky dia ampy | 5
Misy inona eto Vatican?
2015-11-03 @ 20:37 in Izaho sy ny ahy
Haheno resa-be momba an'i Vatican indray isika ato ho ato noho ny fivoahan'ny boky anakiroa izay milaza kolikoly eo anivon'ny mpiasa ambony ao Vatican. Ny votoatin'ireo boky ireo dia manambara ireo fanodikodinam-bola sy fiainan'ny mpanan-karena ataon'ireo olona vitsivitsy ao amin'ny governemantan'i Vatican.
Araka ny re dia tsy mandà ny zava-mitranga ny Papa saingy tony kosa izy satria ady efa natombony hatramin'ny nitondrany ny Fiangonana ny ady amin'ny kolikoly sy ny fahalovana. Mbola misy ireo resin'ny fakam-panahin-dravola ao Vatican tsy maharitra ny mena miraviravy ka mbola manao ny fomban'izao tontolo izao amin'ny figalabonana amin'ny zava-mandalon'ny tany. Vao tonga teo amin'ny toerany ny Papa François dia nahatsikaritra fa misy olana ihany amin'ny fiainana ataon'ireo olona sasany ao Vatican. Nambarany ombieny ombieny fa tokony hiaina ny fahantrana, araka izay lazain'ny Baiboly tokoa, ny Fiangonana indrindra ireo izay eo amin'ny fitondrana. Tamin'ny 22 desambra 2014 ary ny Papa, dia nanao kabary izay nitsikera lalina tokoa ny toe-piainana anaty harena ilomanosan'ny mpitondra sasany. Nantsoina hoe "Kabary mikasika ireo aretina 15" izany kabary izany (jereo eto). Nisy tamin'ireo izay voatsindrona mivantana no nahasahy nijoro ho vavolombelona fa tsy nety tokoa ny fomba niainany ka hanitsy izany. Nisy kosa vitsivitsy izay tsy faly tamin'ny kabarin'ny Papa.
Tsy zava-miafin'i Vatican araka izay lohatenin-gazety natao hanaitra izany ny zava-misy amin'izao fotoana izao fa toe-draharaha efa fantatra sy efa ilofosan'ny Papa hiadiana amin'izao fotoana izao. Ny inoana fotsiny dia hisy andinindininy (détails) betsaka kokoa ao anatin'ireo boky ka izay indrindra no mahatonga ny fanadihadiana isan-karazany satria avy amin'ny andinindininy izay nivoaka dia inoana fa nisy ireo namoaka tsiambaratelom-panjakàna. Amin'ny maha fanjakàna (Etat) mahaleotena an'i Vatican, dia misy tokoa ny atao hoe "secret d'état" ka tsy maintsy misy ny fanadihadiana rehefa mivoaka ireny hahitana hoe iza no namadika. Izany "délits administratifs" izany dia tsy misy ifandraisany amin'ny resaka fahamarinana na tsy fahamarinana ao anatin'ny dossiers navoaka izay "délits moraux". Ny fanjakàna dia manasazy izay namoaka tsiambaratelo araka izay nifanarahana. Anjaran'ny lehiben'ny Fiangonana dia ny Papa kosa ny mandray ny andraikiny vokatry ny fanadihadiana anatiny mikasika an'ireo olona voalaza ao amin'ny boky.
Dia miandry ny tohiny isika amin'izao fotoana izao.
Toerana fianarana fiteny
2015-10-30 @ 09:19 in Izaho sy ny ahy
Fianarana hatrany ny fiainana. Rehefa misy fotoana na toerana hahafahana mianatra dia mianatra zavatra vaovao. Tsy voatery ilaina eo no ho eo... mety tsy ho ilaina mihitsy... nefa mety ho ilaina tampoka koa any aoriana any. Efa malalaka sy feno fitaovana amin'ny internet mikasika zavatra maro azo ianarana dia aleo araraotina. Mianatra mahandro, manjaitra, manamboatra fiarakodia, mandrafitra, informatika, fiteny vaovao. Ny youtube.com no toerana voalohany hahitako fianarana an'ireo rehetra ireo... hatramin'ny mianatra manotra :-)
Fa ny hitako tamin'ity herinandro ity dia ity takelaka iray ity duolingo.com izay fianarana fiteny (langue). Hitako fa tsotra sy manintona ny fomba fampianarany. Tsy mandreraka loatra nefa miditra tsikelikely ao anaty saina sy fitadidiana ny lesona. Ianao ihany no mamaritra ny fatran'ny fianarana tokony hatao isan'andro araka izay fotoana ananana.
Nifidy ny hianatra fiteny alemana aho na dia tsy manana namana alemana sy tsy mieritreritra ny hipetraka any aza :-) Nanandrana sy nanao fanamby fotsiny hoe raha tena mahomby io takelaka io dia tokony hahay teny alemana aho, izay teny anisan'ny sarotra indrindra. Telo andro izao aloha dia nolazainy fa efa 9% no vita... hiezaka hanaraka ny rindra atolony tanteraka aho dia ho hita eo ihany rehefa 100% na nahay fiteny tokoa aho na tsia...
Misy fianarana fiteny italiana, anglisy sns koa ao raha hanandrana
Pourquoi j’ai 4999 amis sur facebook
2015-08-16 @ 11:59 in Izaho sy ny ahy
Efa elaela ihany izay nanaovako facebook izay. Ary nisy fotoana ara tamin’ny taona 2009 nanaovako veloma kely azy mihitsy nakana aina sy nieritreretana (Jereo eto). Nony niverina aho 9 volana taty aoriana dia nazava tsara tao an-tsaiko ny tanjona hanaovana facebook. Nazavaiko kely tato tamin’ilay fiverenako.
Amin’izao aho izany dia manana namana 5000 latsaka kely. Tsy azo fenoina 5000 na dia efa betsaka aza ny lisitry ny mpangataka ao satria manjary tsy afaka mampiditra intsony. Fa nahoana? atao inona daholo? Indrindra raha tsy miresaka, tsy mi-commenter, tsy mi-j’aime, atao inona fotsiny ao?
Amin’izao ny facebook-ko dia raisiko ho mitovy amin’ny carnet d’adresses na contacts amin’ny finday. Rehefa tadiavina tampoka ilay olona, tiana handefasana hafatra tampoka, dia mety ho hitako ao amin’ny facebook izy izay. Ny tanjoko izany tsy hijery tsirairay azy 5000 isaky ny mihetsika satria dia tsy ho araka tokoa, na hi-j’aime izay lazainy sns… tahaka ny hoe tsy hiantso ny contacts ao amin’ny finday isaky ny mihetsika aho na hijery ny laharany isaky ny mihetsika, fa rehefa ilaina izy dia tadiavina dia antsoina na resahana.
Koa aza omenareo tsiny mihitsy aho raha tsy mijery ny momba anareo akory… fa voatahiry ho anisan’ny namako ihany ianareo. Raha tsy mety aminareo moa izany dia azonareo esorina. Raha fantatrareo fa tsy mety hifandray amiko mihitsy ianareo any aoriana any na tsy hisy fotoana mety hifandraisako aminareo mihitsy dia tena marina hoe tsy tokony ho ao anaty lisitra ao akory aho. Tahaka ny hoe numero telephone fantatrareo fa tsy hifandraisanareo intsony mandrakizay ve moa hotehirizina ao anaty contacts ao?
Izany anefa tsy midika hoe tsy mijerijery eny ihany aho indraindray :-)
«Mialoha 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 126 127 128 Manaraka»